Gudoomiyaha Ururka wadaniga ah ee AFGRAD ayaa hambalyeeyay magacaabista Agasimaha cusub ee Wasarada Dhalinyarada , Ciyaaraha iyo Dalxiiska.
You are here: Home somal Gudoomiyaha Ururka wadaniga ah ee AFGRAD ayaa hambalyeeyay magacaabista Agasimaha cusub ee Wasarada Dhalinyarada , Ciyaaraha iyo Dalxiiska.
Hargeisa (Somal Sports) Gudoomiyaha Ururka wadaniga ah ee AFGARAD ayaa madaxwaynaha Jamhuuiryada Somaliland, Axmed Maxamud Siilaanyo ku hanbalyeey magacaabista uu magaacay Agaasimaha Guud ee wasarada Dhalinyarada , Ciyaraha iyo Dalxiista. “Maaxamed Xussein Axmed” (Dhabeeye).
Gudoomiye shiine ayaa manta sidaas waxa uu ku sheegay qoraal kooban oo uu ka soo saaray xafiiskooda magaalada Hargeisa waxaanu u dhignaa sida tan.
“Aniga oo ah gudoomiyaha ururka wadaniga ah ee Afgarad, waxaan madaxwaynaha ku hanbalyaynayaa magacaabista agaasimaha cusub ee wasarada dhalinyarada, ciyaaraha iyo dalxiiska ee uu u magacaabay Maxamed Xussein Axmed, oo ah masuul karti u leh waajibaadka qaran ee madaxwaynuhu u igmadday kaasi oo mudo dheer ku dhexjiray ciyaaraha Somaliland oo aan filayo in uu wax badan ku soo kordhin-doono wasarada dh.C iyo Dalxiiska. Isaga oo khibrad iyo waayo aragnimo u leh xilkaas qaran ee madaxwanuhu u igmaday.